Abaphandi, iProjekthi yeRhafu yoThengiso lwaMhlaba-iGeofumadas
Abaphandi, iProjekthi yeRhafu yokuThengisa izindlu
Ngo-Okthobha, 2011 cadastre
Ukubiza uKhetho lwabaPhandi
Inkqubo yeLatin America kunye neCaribbean yazisa ngenkqubo yokhetho yabaphandi abanomdla wokuthatha inxaxheba kuphononongo lweenkqubo zerhafu yokuthengiswa kwezindlu eLatin America. Le projekthi ifuna ukuqokelela kunye nokuseta idatha yezemali, yezomthetho neyolawulo kwirhafu yepropathi, kwimimandla yamazwe ahlukeneyo engingqi ngenjongo yokuhambisa ulwazi kunye nokulungiswa kwezalathi zentsebenzo kwiimpawu ezibonakalayo, ezinje nge-cadastre, ii-apreyizali, ingqokelela kunye ingqokelela, phakathi kwabanye.
1 Qokelela idatha kwi-10 ukuya kwimimandla ye-15 kwilizwe lakho kwirhafu yepropathi, kubandakanya idatha yezemali; imithetho esisiseko; Uhlobo lokumisela nolawulo lwerhafu; kunye nedatha ngokubanzi yamazwe akhethiweyo kunye nemimandla yolawulo. Idatha iya kusetyenziselwa ukuhlaziya iifayile ezifumaneka kwicandelo "lokungena kwedatha" kunye "nezalathi" izikhombisi ezifikelelekayo:
2 Phonononga iphepha lemibuzo elisetyenziselwe ukuqokelela idatha, kubandakanya nesicelo sefomu elula eyilizwe lakho. Okwangoku imibuzo esetyenzisiweyo ifumaneka apha:
3 Thatha inxaxheba kwiworkshop yobuso ngobuso kwisixeko sasePorto Alegre, eBrazil. Lo masifundisane uya kuqhubeka ngeempelaveki (eziza kubhengezwa), mhlawumbi ekupheleni kukaNovemba okanye phakathi kuDisemba.
Thatha inxaxheba kumasifundisane weentsuku ezi-4, noya kuqhubeka ngo-Matshi 2 (owona mhla uya kuchazwa kungekudala). Olu cweyo luza kubanjwa ngempelaveki.
5 Lungisa iingxelo ezizezomntu kunye neqela ezinxulumene nale misebenzi ilandelayo iza kwenziwa ngexesha lendibano.
Uvandlakanyo olucacileyo lwendlela yophando, izixhobo ezisetyenziswa kuphando, indlela yokusasaza idatha yophando, iindlela zokutsala abo banegalelo kunye nabasebenzisanayo.
Inkqubo yokusebenza kwemithombo yedatha kwilizwe lakho.
Uhlalutyo ngokubanzi lwedatha epapashiweyo malunga nelizwe lakho / amagunya kwiwebhusayithi yeLincoln.
Ukuchongwa kwe10 yamagama amatsha kwiglosari, i-10 yewebhu amakhonkco malunga nelizwe lakho kunye nezipapasho ze10 ezifanelekileyo kwindawo yokuhlawuliswa irhafu.
Igalelo kuphuhliso lwe template (itafile yesishwankathelo) kwirhafu yepropathi eza kusetyenziswa kuthelekiso lwamazwe aphesheya.
Igalelo kulwakhiwo lweengxelo zerhafu yexesha elizayo.
Ukukhethwa kwabathathi-nxaxheba abaqeshiweyo kule projekthi kuya kusekelwa kula maxwebhu alandelayo kunye nolwazi, ekufuneka luthunyelwe kulo ptla@lincolninst.edu Phambi kweNovemba 12 ye2011:
Isifundo seKharityhulamu (CV) esishwankathelwe (ubuninzi beemakhishithi ze-2), kubandakanya idatha yomsebenzi wakho wangoku kunye nobudlelwane nomxholo werhafu yepropathi.
Izimvo zamaphepha aphezulu e-3 malunga nemeko kunye / okanye imicimbi ebalulekileyo kwirhafu yepropathi kwilizwe lakho.
Ileta yesalathiso esivela kwingcaphephe osebenzayo, kubandakanya idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yomnxeba ukunxibelelana nawe.
Ukubonisa ukuba yeyiphi na imigaqo onokuthi uyiqwalasele inokwenzeka kwaye imele ilizwe lakho, icacisa izikhombisi kwimithombo yedatha apho uyakufumana khona ulwazi loqoqosho lwentlalo kunye neenkcukacha zerhafu ezifanelekileyo kule projekthi.
Imbuyekezo - I-US $ 9,200. Ukongeza, iZiko laseLincoln liza kugubungela iindleko zothutho, indawo yokuhlala kunye nokutya okunxulumene nomasifundisane wobuso ngobuso.
Ixesha lesivumelwano -Novemba-2011 ukuya nge-Meyi 2012.
Ngemibuzo kunye neenkcazo, bhalela ku ptla@lincolninst.edu.
Ungalandela iifowuni ezifanayo kwi-Facebook nakwi-Twitter.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iinqununu zeGoogle Street View
Post Next Izihloko ezingezizo ezobuchwephesha kwiNkomfa yoPhando loMhlabaOkulandelayo »